ब्लग आफ्ना भावना बाँड्ने थलो भएकोले यसमा स्व-अनुशासन हुनुपर्छ-श्रृष्टि काफ्ले - MeroReport
ब्लग आफ्ना भावना बाँड्ने थलो भएकोले यसमा स्व-अनुशासन हुनुपर्छ-श्रृष्टि काफ्ले
अंग्रेजी साहित्यमा स्नाकोत्तर श्रृष्टि काफ्ले अहिले विज्ञापन एजेन्सीमा कार्यरत छिन् । उनलाई इभेन्ट म्यानेज गर्न तथा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न रमाईलो लाग्छ । कुनै समयमा सगरमाथा टेलिभिजनमा अंग्रेजी समाचार वाचन समेत गर्ने उनी अहिले विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा समसामायिक विषयमा लेख लेख्ने गर्दछिन । पूर्वको हरियाली शहर ईटहरी, सुनसरीकी उनलाई उपन्यास पढ्न तथा नयाँ-नयाँ ठाँउको भम्रण गर्न खुबै मनपर्छ । विज्ञापन एजेन्सी तथा भ्रमणका अलावा श्रृष्टि सोसल मिडिया र ब्लग लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन । मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा आज हामीले उनै श्रृष्टि काफ्लेलाई प्रस्तुत गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानी :
श्रृष्टि काफ्लेलाई अरुले कसरी चिन्ने? अलिकति आफ्नो बारेमा बताइदिनुस न ।
मलाई सोसल मिडिया मनपर्छ अनि यसमा आफ्ना कुरा भन्न अरुका कुरा सुन्न अनि नयाँ कुरा सिक्न रमाईलो लाग्छ र विशेष गरेर भन्नुपर्दा मलाई मेरो नाम सृष्टि काफ्ले नामबाट नै चिनिन मनपर्छ । सोसल मिडिया होस या जहाँसुकै यही नामले चिनिन चाहन्छु ।
मैले ब्लगिङ शुरु गरेको धेरै भएको छैन । नयाँ वर्षलाई नयाँ योजना बनाउने र प्रतिबद्धता गर्ने दिनको रुपमा लिईन्छ त्यसैले मैले पनि ब्लगमा सक्रिय हुन्छु भन्ने सोच बनाएर नै सन् २०१४ देखि ब्लगिङ शुरु गरे । अहिले म आफ्नो कुराहरु यसमा लेख्छु । र यसको आवश्यकता पनि छ जस्तो लाग्छ किनकी सबै कुरा सबैसँग भन्न सकिन्न र सबैले बुझ्दैनन पनि तर ब्लगमा लेख्यो भने त्यो विचार मन पर्नेले पढ्छन र प्रतिक्रिया दिन्छन पनि ।
केका लागि ब्लगिङ गर्नुहुन्छ रु ब्लगिङका लागि कति समय दिनुहुन्छ?
ब्लगिङ भनेको आफ्ना कुराहरु राख्ने अझ भनौ आफ्ना जानेका कुरा बाँडने थलो हो । म शब्दमा शक्ति हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु र म शब्दसँग खेल्दै आफ्ना कुराहरु राख्न ब्लगिङ गर्छु । ब्लगिङ कै लागि भनेर मैले कुनै समय भने छुट्टाएकी छैन तर प्रायजसो म सप्ताहन्तमा पोष्ट गर्छु ।
कुनै विशेष विषयमा नै त ब्लगिङ गरेको छैन । साधरणतया म, युवा, महिला तथा मानव अधिकारका विषयमा लेख्छु भने पत्रिकामा प्रकाशित मेरा लेखहरु पनि मेरो ब्लगमा राख्ने गरेको छु । त्यस्तै माया प्रेम सम्बन्धि कविता र खाना बनाउने रेसेपी पनि राख्ने गरेको छु ।
तपाँइले चलाउने ब्लग http://shristikafle.blogspot.com/ मात्रै हो या अरु पनि छन्?
यो मात्रै हो । अरु छैन ।
हो, गाह्रो छ र हामी धेरै तिर बाँडिएका पनि छौ । हामीले शिक्षा, करियर, काम, परिवार र साथीभाई सबैलाई समय दिनु पर्ने हुन्छ । यसले गर्दा गाह्रो त हुन्छ तर भनिन्छ नि असम्भव भन्ने कुरा नै हुँदैन । तसर्थ आफ्नो समय कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा आफुमा पनि भर पर्छ जस्तो लाग्छ ।
सबै काममा चुनौती त हुन्छ नै । पहिलो कुरा त समय ब्यवस्थापन कै हुन्छ अनि दोस्रो कुरा चै भाषा र कन्टेन्टको पनि हो । अनि पढ्न योग्य छ कि छैन भनेर आफैले छुट्टाउन नि गाह्रो छ । मानिस स्वभावतः माया र प्रेरणा चाहने प्राणी पनि हो ।
राम्रो नै छ । धेरैले सदुपयोग नै गरिरहेका छन् ।
मलाई पुस्तक पढ्न असाध्यै मन पर्छ । विशेष गरी आख्यानहरु पढ्न मन पर्छ । मेरो झोलामा पनि एउटा उपन्यास त जहिल्यै हुन्छ नै । मैले भर्खरै मात्र भारतिय लेखक रविन्द्र सिंहको आई टु ह्याड अ लभ स्टोरी र क्यान लभ ह्यापन ट्वाइस पढेर सक्काए । मलाई चलचित्र र नाटक हेर्न पनि उत्तिकै मन पर्छ । हाँस्यब्यंगात्मक र रोमान्टिक चलचित्र मेरो रोजाईमा पर्छ ।
प्राय: पढ्छु र फेसबुक र ट्वीटरमा सेयर पनि गर्छु । म बिशेषत आख्यान, कविता तथा यात्रा वृत्तान्तहरु भएका ब्लगहरु पढ्न रुचाउँछु । मैले प्राय: पढ्ने ब्लगमा devillangell.blogspot.com र sewasmusings.blogspot.com रहेका छन् ।
यस विषयमा भने मलाई खासै थाहा छैन ।
ब्लग भनेको आफ्ना कुराहरु राख्ने थलो हो । जब आफ्ना कुरा भावना बाँड्ने थलो भई सकेपछि यसमा स्व-अनुशासन पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । मेरो विचारमा र मेरो लागि यसमा आचारसंहिताको कुनै आवश्यकता छैन जबसम्म ब्यक्तिले आफ्नो सामाजिक कर्तव्य भुल्दैन ।
केही समय अगाडीको कुरा हो मैले प्रेम कविता लेखेको थिए र त्यसलाई ब्लगमा पोष्ट गरी फेसबुकमा सेयर गरेको थिए । त्यो कविता देखेर मैले कविता पनि लेख्छु भनेर मेरो साथीहरु छक्क पर्नुभएको थियो । अँझ एक जना साथीले त अझै लेख्नको लागि जोड दिनुभयो ताकि त्यो कविता मार्फत उहाँले कुनै केटीलाई प्रस्ताव सक्नुहोस । हा हा हा ।
सोसल मिडियामा हामी हाम्रा विचारहरु राख्छौँ तर यो थाहा पाउँदैनौँ कि यो कहाँसम्म र कतिसम्म पुग्छ भनेर । अब फेसबुककै कुरा गर्दा यसले साथी तथा आफन्तहरु बिच सम्पर्कमा राख्ने गर्छ । ट्वीटर भने एउटा उपयूक्त थलो हो जहाँ बौद्धिक कुरा देखि लिएर सबै प्रकारका सुचनाहरु हेर्न, देख्न, पढ्न तथा राख्न सकिन्छ ।
अब भने सोसल मिडिया पनि नेपालको लागि नौलो हैन र अहिले आफ्ना विचारहरु राख्न यो माध्यम ज्यादै नै उपयुक्त हुँदैगएको छ । यसको एउटा मात्र नभएर धेरैवटा फाइदाहरु रहेका छन् ।
पत्रकारिता भनेको ABC: Accuracy, Balance and Credibility हो । मलाई अचम्म लाग्छ ब्लगिङमा यी तीन कुरा कहाँ हुन्छ?
मलाई आफ्ना कुराहरु राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद ।
Comment by Amuna Chapagain on September 3, 2014 at 2:23pm
Comment by Prakash Lamichhane on September 3, 2014 at 2:14pm